कोरोना जिते पनि समाजको डर « Salleri Khabar
कोरोना जिते पनि समाजको डर
१९ भदाै, दोलखा – सधैँ बिरामीको उपचारमा दत्तचित्त लागिरहने म शनिबार भने आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ । करिब साढे ६ बजेतिर अकस्मात् कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भन्ने खबर सुनेँ ।
मेरी आमालाई धारामा पानी थाप्न र पसलमा नुन किन्नसमेत दिइएन । घरका परिवार बाटोमा हिँड्दा गाउँले टाढै रोकिनेदेखि फरक्क फर्केर अन्तै जाने सम्मका घटना सुन्दा यो कोरोनाभन्दा खतरा रोग गाउँ, समाजमा भित्रिएछ भन्ने लाग्यो । आज म कोरोना जितेर घर जाँदै छु तर त्यहाँको गाउँ, समाजले मलाई गर्ने व्यवहार कस्तो रहन्छ भन्नेमै पीर लागिरहेको छ –उहाँले गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो ।
फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ? के को मूल्य कति पुग्यो ?
आज मिति २०७८ साल माघ ६ गते बिहिबार, आजको राशीफल